देउवा र सिटौलाबीच अझै साँठगाँठ ! - Jhilko
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच अझै पनि गोप्य साँठगाँठ कायमै रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सिटौला समूूहसँग सतर्क रहन आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सभापति देउवा र नेता सिटौलाले मोहम्मद अफ्ताब आलमका पक्षमा अभिव्यक्ति दिए लगत्तै आफ्नो निवासमा भएको भेलामा नेता पौडेलले यो आग्रह गरेका हुन् ।
नेता अफ्ताब आलम पौडल पक्षका हुन्, तर उनलाई पक्राउ गरिए पछि पार्टीले आधिकारिक धारणा नबनाउँदै सभापति देउवा र नेता सिटौलाले हतारहतार आपत्ति प्रकट गरे । यस्ता मामिलामा सभापति देउवा निकै सचेत नेता मानिन्थे । उनले व्यापक दबावका बाबजुद त्यतिबेला खुमबहादुर खड्का र चिरञ्जीवी वाग्लेको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिएनन् । देउवाको पार्टीमा रहेका खड्का र वाग्लेमाथि भ्रष्टाचारको मुद्धा लाग्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजनीतिक प्रतिशोध लिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए, तर देउवाले भने निश्पक्ष छानविन तथा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर यसपटक भने पौडेल समूूहमा रहेका अफताब आलमको बचाउमा सभापति देउवाले चर्को टिप्पणी गरे ।
देउवाले यो टिप्पणी किन गरे त? कसको सल्लाहमा देउवाले यो टिप्पणी गरे ? भन्ने प्रश्नको बास्तिविक उत्तर नेपाली कांग्रेसका थोरैलाई मात्रै थाहा छ । समाचार स्रोतका अनुसार सिटौलाको सल्लाहमा देउवाले आफताबको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका हुन् । अफ्ताब दोषी ठहर भएको अवस्थामा सिटौला समेत तानिने अवस्था हुनसक्ने एकथरि कांग्रेसीहरुले बताएका छन् । त्यो घटना भएको बेला सिटौला गृहमन्त्री थिए । फिल्डमा रहेका इन्स्पेक्टरलाई उनैको निर्देशनमा राति १० वजे सरुवा गरिएको चर्चा गरिदैंछ । घटनाका सम्पूर्ण प्रमाणहरु नष्ट गर्न तथा मुद्धा नर्दा नगर्न सिटौलाकै निर्देशनमा काम भएको कांग्रेसमा सिटौला विपक्षमा रहेका एक कांग्रेसी नेताले बताए । घटना धेरै पुरानो भएकोले आफ्ताब आलमको हकमा प्रमाण पुग्न समस्या भए पनि सिटौलाको हकमा भने पर्याप्त प्रमाण पुग्ने अवस्था रहेको ती कांग्रेसी नेताको जिकिर रहेको छ ।
आफ्ना सहयोगी सिटौला तानिने निश्चित भएपछि सभापति देउवाले यो घटनालाई राजनीतिक रंग दिन खोजेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । देउवा सिटौलाकै कारण सभापति बनेका हुन् । सिटौलाले पौडेल समूूहबाट विद्रोह नगरेको भए देउवाले सभापति पदमा चुनाव जित्ने संभावना थिएन ।
यतिबेला सभापति देउवाको कार्यकाल तीन वर्ष लम्व्याउन र १४ औं महाधिबेशनमा पनि देउवालाई नै जिताउन सिटौला भित्रभित्रै सक्रिय रहेको कांग्रेसको एक खेमाले बताएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार आईजीपी प्रकरण तथा प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रकरणमा पनि देउवा सिटौलाकै सल्लाहमा अघि बढेका थिए ।
बाहिर देख्दा विरोध गरे जस्तो गर्ने तर भित्र भित्रै देउवालाई साथ दिने सिटौलाको शैलीबाट सर्तक हुन कोइराला परिवारले सुरुमै वरिष्ठ नेता पौडेललाई सचेत गराएको थियो, तर पौडेलले सिटौलाकै सल्लाहमा संसदीय समिति तथा कार्यसम्पादन समिति विघटन गर्न सभापति देउवामाथि दबाव दिए । देउवाले पौडेलको दबाव स्वीकार गर्दै दुवै समिति विघटन गरे । तर यतिबेला यी दुई समिति पुनर्गठन गर्न समस्या भएको छ ।
संस्थापन इतरलाई दिइने ४० प्रतिशत कोटामा सिटौला समूूहलाई पनि समेट्नु पर्ने सभापति देउवाको आग्रहपछि मात्रै यो भित्री खेलको रहस्य पौडेल समूूहले बुझेको हो । विगतमा संस्थापन र सिटौला समूूह एकै ठाउँमा थियो ।
जसले ६० प्रतिशत कोटा पाएको थियो भने पौडेल समुहले ४० प्रतिशत पाएको थियो । अब पौडेल समूूहको यही ४० प्रतिशतमा सिटौला समूूहलाई पनि समेट्नु पर्ने प्रस्ताव संस्थापन पक्षले अघि सारेको छ । जुन प्रस्ताव पौडेल समूूहले स्वीकार गरेको छैन । अहिले कांग्रेसभित्रको मुख्य लफडा भनेको यही हो । यही लफडाका कारण पनि पौडेलसँग सिटौला समूूह टाढिँदै गएको छ ।
स्थान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटार । समय मध्यान्ह । कार्यक्रम, नेकपा पार्टी...
कोभिड–१९को स्वतन्त्र छानबिन मागमा अमेरिका र चीनलाई ल्याउने...
सोमबार हुने डब्लुएचएमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको भाइरससम्बन्धी सो मागमा अहिलेसम्म अमेरिका...
एन्फा बाटिका तयार
बाटिकामा विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा, एसियन फुटबल फेडेरेसन (एएफसी) र एन्फाको...